Ny Google Pixel 4 dia aseho amin'ny 15 Oktobra | Androidsis
Ny Google Pixel 4 dia aseho amin'ny 15 Oktobra
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nampahafantarinay anao ny daty fampisehoana mety ho an'ny Google Pixels. Daty izay nohamafisin'ny mpikaroka farany tamin'ny farany: io no 15 Oktobra tao New York City amin'ny 16:9 tolak'andro Espaniôla, 12 maraina any Mexico, XNUMX tolakandro any Argentina, Chile ary Colombia.
Hatramin'izao, tsy misy na inona na inona mety hahagaga antsika momba ny zavatra hasehon'i Google antsika momba ny taranaka vaovao amin'ny faritry Pixel. Aiza raha manantena tsy ampoizina isika dia ao amin'ny vokatra sisa azon'ilay orinasa alefa na havaozina, ary koa ireo fiasa vaovao azony ampiana amin'ireo serivisy maimaim-poana atolotray antsika.
Miaraka amin'ny taranaka vaovaon'ny Pixel, dia hanatrika koa ireo tovolahy ao amin'ny Google ny taranaka faharoa an'ny Google Home Mini, ny AMpandahateny mahay mandanjalanja indrindra an'ny orinasa izany nandritra ny volana vitsivitsy, dia nomena anarana hoe Nest Mini.
Raha misy ny fanavaozana ny Nest Mini, dia azo inoana fa havaozina ihany koa ireo mpandahateny hafa rehetra ampiasain'i Google ho antsika. Azo inoana koa fa hampidirina hiditra ao ilay fitaovana marani-tsaina vaovao vaovao thermostat, fakan-tsary fiarovana ary vavahady mihidy izay omenao anay amin'ny alàlan'ny Nest.
Ho afaka hanaraka an'ity hetsika ity amin'ny alàlan'ilay horonantsary avelako ianao etsy ambony. Raha tsy te halahelo ny hetsika isika, ny fikitihana ny horonantsary dia manokatra ny rohy ao amin'ny YouTube ary mamela antsika hampihetsika fampahatsiahivana mba tsy handalo antsika.
Avy amin'ny Androidsis no hanatanterahantsika a fanaraha-maso manokana ny vokatra rehetra atolotry ny Google amin'ny hetsika amin'ny 15 Oktobra, ka raha tsy manana fotoana hanarahana azy mivantana ianao dia afaka mampahalala anao ny vaovao rehetra amin'ny alàlanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Google Pixel 4 dia aseho amin'ny 15 Oktobra
Ahoana ny fanovana ny endrika kinova fampiharana amin'ny Android 10 raha tsy misy fampiharana fahatelo